BF Somalia oo looga digay heshiiska dekadaha ee Soomaaliya Iyo Ethiopia - Caasimada Online
Home Warar BF Somalia oo looga digay heshiiska dekadaha ee Soomaaliya Iyo Ethiopia
BF Somalia oo looga digay heshiiska dekadaha ee Soomaaliya Iyo Ethiopia
Muqdisho (Caasimada Online) – Mas’uuliyiin horay uga tirsanaa dowladii hore ayaa ka digay in Xildhibaanada baarlamaanka Somalia ay meel mariyaan Heshiiska16-ka qodob ka kooban ee dhexmaray Somalia iyo Ethiopia.
Cabdi Barre Jibriil, oo kamid ahaa Xildhibaanadii hore ayaa sheegay in Heshiiskaasi uu yahay mid xaaran ah, isla markaana lagu sii qaribaayo Somalia.
Isagoo ka hadlaayay dhibta ka dhalankarta Heshiiska ayaa waxa uu sheegay Cabdi Barre in xilligaan aanay habooneyn in Somalia dekadaheeda ay kula heshiiso Ethiopia oo uu tilmaamay in xilligaan aan wax dan ah ugu jirin dalka.
‘’Adeer anigu halis baan u arkaa Heshiiska labada dal, waxaanu jirin baahi gaara xiligaan Somalia ku qasbeysa in dekadaheeda ay u gacan galiso Ethiopia’’
Cabdi Barre, ayaa Xildhibaanada golaha shacabka ka dalbaday ineysan aqbalin heshiiska lala galay dowladda Ethiopia oo uu ku sheegay halis hor leh oo kusoo fool leh Somalia.
Sidoo kale, Cabdi Barre ayaa tilmaamay in heshiiskan aan loo gelin dan Soomaaliyeed balse ay jirto baqdin waa sida uu hadalka u dhigaye.
Haddalka Cabdi Barre, ayaa u muuqda mid ku foorara dowlada Somalia, wallow Xildhibaanada baarlamaanka qudhooda ay ku kala aragti duwan yihiin Heshiiska.